Ciidamo ka tirsan Puntland oo weerar aan caadi ahayn ku qaaday magaalada Qandala ee gobolka Bari – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamo ka tirsan Puntland oo weerar aan caadi ahayn ku qaaday magaalada Qandala ee gobolka Bari
Wararka naga soo gaaraya magaalada Qandala ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada badda ee maamulka Puntland ay habeenkii xalay weerar duqeyn ah ku qaadeen magaaladaasi, halkasi oo ay fariisin ku leeyihiin dagaalyahano ka tirsan ururka Daacish.
Ciidamo ka tirsan kuwa Badda ee maamulka Puntland oo wata doomo nooca dagaalka ah ayaa dhanka xeebta ah kasoo duqeeyay magaalada Qandala ee gobolka Bari.
Dagaalyahanada Daacish ee ku sugnaa magaalada Qandala ayaa iyana weerarka ciidanka Puntland ku jawaabay rasaas kale oo ay u rideen dhinaca badda.
Labadada dhinac ayaa la sheegayaa inay dagaalkaasi isku weydaarsadeen rasaas aad u culus, inkastoo aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rasaastaasi.
Weerarka ay qaadeen ciidanka Puntland ayaa ahaa mid qorsheysan, iyadoona qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa magaalada Qandala ay todobaadyo ka hor halkaasi isaga barakaceen, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Daacish ay la wareegeen.
Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan ciidanka Puntland ayaa sheegay in ciidankooda oo aad u hubeysan ay haatan ku sugan yihiin meel aaan sidaasi uga dheerayn magaalada Qandala, halkaasi oo fariisin ay ku leeyihiin dagaalyahanada Daacish.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii magaalada Qandala ee gobolka Bari ay gacan ku haynteeda la wareegeen dagaalyahano ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan dalka Soomaaliya, islamarkaana uu hogaaminayo wadaadka caanka ah ee mayilka adag ee lagu magacaabo Sheekh C/qaadir Muumin oo hore uga tirsanaa Al-shabaab.